Nezvedu - Raymin Ratidza Zvigadzirwa Co, Ltd.
Raymin Ratidza hunyanzvi mune yakagadziriswa R&D, kugadzira uye kutengesa kwemapepa ekuratidzira anomira, mabhokisi ezvipo uye mamwe maratidziro ekupakata mhinduro. Parizvino, isu takashandira vanopfuura chiuru vatengi vekumba uye vekunze. Kubva pachigadzirwa kurongedza kusvika kuchiratidziro chechigadzirwa, isu tinogara tichitora zvinodiwa nevatengi sechinhu chinotungamira uye tobatanidza chaicho kugadzirisa chakasarudzika chigadzirwa kuratidza kurongedza chirongwa. Zvemirairo zvinotengeswa mhiri kwemakungwa, tichifunga nezvebhadharo revashandi venyika yevatengi, isu tinopawo ruzha rwekutakura, gadzirisa bhokisi re plug, chengetedzo yekona uye kadhi bhodhi kune yega odha, kuve nechokwadi chekuti gungano rehutatu chigadzirwa kuratidza rack mushure mekutumira Iyo inogona kusvika kune yakasarudzika yevatengi yakatarwa chitoro chakasimba. Izvo zvigadzirwa zvekushandisa zvinopihwa nekambani yedu zvinosanganisira zvitoro, supamaketi, kuratidzira, mahotera nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji. Raymin Ratidziro inosimbirira pane vanhu-inotungamira, inokurudzira hunyanzvi, uye inoita nepainogona napo kupa vatengi nekumisikidza kumisikidza, inoshanda uye inoshanda kurongedza uye kuratidza mhinduro.
Tichitarisa kune ramangwana, Raymin Ratidza richanamatira kubhizimusi kubudirira senzira inotungamira yekusimudzira, ramba uchisimbisa tekinoroji hunyanzvi, manejimendi hunyanzvi uye kushambadzira hunyanzvi sehwaro hwehurongwa hwehunyanzvi, uye shingairira kupa vatengi vepasirese mapakeji akakodzera uye ratidza mhinduro.
♦ Yedu yemubatanidzwa tsika
Kubva pakagadzwa Raymin Ratidza muna 2012, kugadzirwa kwedu uye R & D timu yakura kubva kuboka diki kusvika ku300+ vanhu. Iyo nzvimbo yefekitori yakawedzera kusvika ku50.000 mativi emamirimita, uye mutengo mu2019 wasvika 25.000.000 US madhora mune imwe kudonha swoop. Iye zvino tave tave kambani ine imwe nhanho, inoenderana zvakanyanya nekambani yekambani tsika.
1. Nzira yekufunga
Pfungwa yepakati ndeye "vanhu-vanotungamira, mutengi kutanga".
Iyo yemakambani mishoni ndeye "Win-win mushandirapamwe uye basa rakakwana."
2. Main maficha
Shingairira kugadzira zvitsva: Hunhu hwekutanga kushinga kuzvishingisa, kuedza kuedza, kutsunga kufunga nekuita.
Simudzira kuvimbika: Simudzira kuvimbika ndicho chinhu chakakosha cheRaymin Ratidza.
Kuchengeta vashandi: investa mamirioni gumi yuan gore rega rega kudzidziswa kwevashandi, kumisikidza mudonzvo kantini, uye kupa vashandi chikafu katatu pazuva mahara.
Ita zvatinogona: Raymin Ratidza rine chiono chakakura, rinoda zvakanyanyisa mwero webasa zviyero, uye rinoteedzera "kugadzira mhinduro dzese muzvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
♦ Kambani Yekuvandudza Nguva
2013 Iyo kambani yakasvika chibvumirano naGuangdong Fenggao Printing Technology Co, Ltd. uye ikava bhizimusi rayo shamwari.
2016 R & D timu rekambani rakagadzira imwe-yechipiri kuratidza kumira mhinduro, iyo yave ichinyanya kudiwa uye inozivikanwa nevatengi.
2018 Iyo kambani yakapasa BSCI Certification uye yakawana Disney kudhinda uye kuputira chigadzirwa kugadzira mvumo.
2019 Iyo kambani yakaunza iyo GMI color manejimendi sisitimu yekupa vatengi neepamusoro-soro kudhinda uye kuenzanisa masevhisi masevhisi kuti ave nechokwadi chekuti ayo marangi mavara ari mune yakanyanya mamiriro.
2020 Makambani ekutanga ekudhinda ekambani, matatu otomatiki mapepa edoro, 3 otomatiki mapepa ekumesa michina, 1 CTP yekutsikisa muchina, 1 gluing muchina, 2 otomatiki bhokisi gluing michina, uye 1 yekucheka prototype muchina. Muchina wekudhindisa inki wakawedzerwa pahwaro.
1. Yakagadziridzwa Standard Fekitori Chivakwa: Tine musangano unopfuura zviuru makumi mashanu emamirimita, akagadzirwa neyakagadzika seti yekugadzira uye yekugadzira muchina, kubva pakudhinda kuenda kubhokisi gluing.
2. Chiitiko: Anopfuura makore makumi maviri ekugadzira ruzivo mumakadhibhodhi ekuratidzira uye yemhando yepamusoro mapepa ekupakata. Isu tiri zvakare vakanaka pakuunganidza uye kurongedza zvigadzirwa zvekuratidzira racks, kubatsira mutengi kuchengetedza mutengo wevashandi padivi pavo.
3. Zvitifiketi Kuongorora: ISO9001, FSC, BSCI, Disney, Walmart
4. Simbiso yemhando yepamusoro: Isu tinoshandisa GMI color management system yekuenderana kwemavara; uye shandisa yekuyedza michina kumucheto kumanikidza uye kuputika simba rekadhibhodhi.
5. Yazvino yekugadzira cheni: Yepamberi michina yekugadzira michina yemusangano, kusanganisira imwe-yekumira yekugadzira michina yekugadzira chakuvhuvhu, kudhinda, kurapwa kwepamusoro, kusimudzira, laminating uye kunama.